လမ်းပျောက် မြေပုံ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
အမရေးတာဖတ်ရတာ အင်မတန်ကောင်းတာပဲ။ လွမ်းစရာကောင်းသလို၊ ဟာသကလည်း အင်မတန်မြောက်၊ နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကလည်းထိ။
အမရေ ဖတ်ရင်းနဲ့ ရယ်ရတာ အူတက်တော့မယ်။ မထိန်းနိုင်ပဲအကျယ်ကြီးတောင် အော်ရယ်မိလို့ ရုံးမှာ နည်းနည်းတောင် ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။
အမတို့ သားအဖ ကားမောင်းတဲ့ ဟာက တကယ့်ကို ဟာသ။
ရေးတတ်ပလေတယ် ချိုသင်း ရယ်..
လိုရင်းမရောက်တာ နဲ့ တုံးတာ ချင်းအတူတူ …
့အဲဒိ တစ်ချို့ သောငတုံးများရဲ့ရကော့ဒ်ကတော့ နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း..သန့် ရှင်း နေလိမ့်မယ်မထင်ဘူး…
အညာနေမှာ တမာပင်ရိပ် ခိုလိုက်ရသလိုပဲ။ အရိပ်တင် အေးတာမဟုတ်၊ တမာရွက်နံ့ကလေးကလည်း သင်းနေသေးတာ။
မိုးချိုသင်းစာတွေ ဖတ်ရတာ အဲဒီလိုပဲ။
မချိုသင်းရေ..ဖီးလ် ထဲမှာ လိုပေါ့.. ခုနေသာ..ကွင်းဆင်းရရင်...GPS လေး နဲ့ဆို.. ဇိမ်ပဲ။
အသစ်လည်းတင်ထားပီ။ အမြဲလာအားပေးတာလည်း..၀မ်းသာတယ်။ တွေ့ကြအုံးမယ်လေ..ပျော်၂ပါး၂ ပေါ့
မချိုသင်းရေ .. အမ မေငြိမ်းဘလောဂ့်မှာ အမဘလောဂ့်အကြောင်း တွေ့ ပြီးတည်းက လာဖတ်ဖြစ်နေတာ ။ ဟာသအငွေ့ အသက်လေးရောပြီး ရေးထားတဲ့ အမပို့စ်တွေကို ကြိုက်တယ် ။ ဖတ်၂ပြီး ရယ်ရတယ် ။ အမြဲဖတ်နေပေမယ့် ကွန်မန့် ၀င်မရေးဖြစ် ။
ခုပို့စ်ကတော့ အောက်ဆုံးပိုဒ် စာကြောင်းလေးဆွဲယူထားတာ ကြိုက်လွန်းလို့း)
ဆရာ့ကဗျာ တပုဒ်ကိုပါ သွား သတိရလိုက်မိတယ်။
အောက်ဆုံး စာနှစ်ကြောင်းက အတော်ခရီးရောက်ပါ
ဗမာတွေ အိုဟင်နရီတယ်ကြိုက်တာဘဲ ပြီးကာနီးအလှည့်အပြောင်းတွေချည်းဘဲ ဟာဟား ကိုပေါ ပိတောက်ရိပ်လဲဒီပုံစံမျိုးလေးဘဲ အလွန်ကောင်းပါသည် မမိုးချိုသင်း စောင့်မျော်ဖတ်ရှုလျက်ပါ။
Aung Din said...
Hey Monk Cho Thwin (oh, sorry) Moe Cho Thinn,
I have read all of your posts and like all of them. Thank you very much for your beautiful writings.Please keep your good words.
Take care, Aung Din
ပိုင်ပ .. ပြောချင်တဲ့စကားကွက်တိပဲ..
ဒါတွေကြောင့်လဲ ဒီblogလေးကို မလာရ မနေနိုင် စွဲလန်းနေတာပေါ့… မ ရေ ကောင်းလွန်းလို့ပညာတွေ ယူသွားတယ်…ဒါထက်… ကျွန်မလဲ လမ်းမှတ်တဲ့နေရာမှာ အတော်ညံ့တယ်… မ ကမှ ကားမောင်းတတ်သေး… ကျွန်မဆို ကားတောင် ဖြောင့်အောင် မမောင်းတတ်…